China Honey Filling Machine Line and mpamatsy | Higee
Masinina mameno rano
Masinina mameno rano hatrany
Masinina mameno rano tavoahangy fitaratra
Masinina mameno rano tavoahangy PET
Masinina mameno rano 3-5L
Masinina famenoana rano 5 galona
Masinina mameno zava-pisotro
milina famenoana zava-pisotro misy alikaola
Masinina mameno zava-pisotro tsy misy gazy
Masinina famenoana zava-pisotro angovo
Tsipika famenoana ranom-boankazo
Tsipika milina famenon'ny tavoahangy PET
Masinina mameno zava-pisotro misy alikaola
Masinina mameno labiera tavoahangy fitaratra
Kitapo masinina famenoana alikaola tavoahangy
Tsipika milina famenoana solika
Tsipika milina mitsivalana solika
Tsipika milina famenoana menaka ilaina
Fitsaboana rano & Pasteurizer
rafitra fitsaboana rano
Masinina mameno sakafo
Tabilao famenoana tantely
Masinina mameno fanafody
Masinina mameno syrup
Masinina famenoana kosmetika
Andalana milina famenoana shampoo
Masinina mameno simika
Masinina mameno ny kaopy misy ranoka simika
Masinina fametahana Linear mandeha ho azy
Milina Cap Loader mandeha ho azy
Fametahana tavoahangy boribory boribory HAY Series
Labeler anoloana sy aoriana dia manana andiany
Amboary ny toeran'ny sticker sticker HDY Series
Fametahana marindrano stiker HAW Series
Simika amina karazana kaopy ...
Famonoana shampoo mandeha ho azy M ...
Famenoana Syrup avo lenta ...
Menaka ilaina hamenoana machi ...
Ity tsipika milina famenoana ity dia mety amin'ny fitaovana viscosity avo lenta mameno ny fandrakofana sy ny fanoratana. Azontsika atao ny mampita ny tsipika iray manontolo manomboka amin'ny mpamatsy tavoahangy hatramin'ny mpamory tavoahangy miaraka amin'ny tsipika famokarana tantely feno.
Fahaizana manome: 30 Sets / Volana
Fe-potoana ara-barotra: FOB, CNF, CIF, EXW
Seranan-tsambo: Seranan-tsambo Shanghai any Shina
Fe-potoana fandoavana: TT, L / C
Fotoana famokarana: Raha ny tokony ho 30-45 andro dia tokony hamafisina indray.
Milina famenoana marika fametahana marika milina
1.Atomatika tantely famenoana tantely
Ny milina fameno tantely dia mety amin'ny famenoana tantely misy tsirony na ranon-tsiranoka avo lenta ao anaty tavoahangy PET na vera isan-karazany miaraka amin'ny 100ml ka hatramin'ny 500ml
Ny mpamatsy latabatra fihodina tavoahangy sy ny tavoahangin-tantely dia mifangaro ao anaty masinina iray. Ny masininay dia mandeha ho azy tanteraka ary manana famolavolana siantifika sy mirindra. Miaraka amin'ny fisehoana tsara sy ny fiasa feno, mora ny miasa sy mitazona azy.
Mora ny manova tavoahangy. Tsy ilaina ny manitsy ny haavon'ny masinina amin'ny alàlan'ny fihazonana ny vozona amin'ny fitaterana tavoahangy. Mila miova ihany ny kojakoja fitehirizana.
Ny tavoahangy dia mamaky famenoana sy famonoana amin'ny abrasion kely. Ny valizy mameno haingam-pandeha dia manome toky fa hafainganam-pandeha haingam-pandeha sy haavo marina.
Isika rehetra dia mampiasa vy tsy metaly 304 na haavo ara-tsakafo mba hiantohana ny kalitaon'ny mīkini. Ny rafitra fanaraha-maso PLC dia ampiasaina ary ny faritra elektrika dia mampiasa marika malaza toy ny Mitsubishi Siemens Schneider sns.
Teo aloha: Tsipika milina famenoana menaka ilaina
Manaraka: Fitaovana milina mameno syrup avo lenta